Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo hishiis ku saxiixday Nairobi |
Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo hishiis ku saxiixday Nairobi
Madaxweynayaasha Somalia iyo Kenya, Maxamed Cabdullhi Farmaajo iyo Uhurro Kenya ayaa maanta kullan ku yeeshay magaalada Nairobi, iyagoo kullankooda kadib kala saxiixda heshiis dhowr qodob ka kooban.
Labada madaxweyne ayaa kulankooda uga wada hadlay muhiimada ah in la xoojiyo xiriirka labada wadan iyo ka wada shaqeynta danaha labada dowladood.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay si dhow ay labada dal uga wada shaqeynayaan arrimaha ammaanka, isla markaana ay bilaabi doonaa duulimaadyo toos ah,
Sidoo kale Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dadka heysta baasaboorada Servive iyo Diplomatic ay Viisaha ka qaadanayaan garoomada diyaaradaha Kenya, halka markii hore loogu soo saari jiray, ka hor inta aysan garoomada diyaaradaha Kenya ka degin.
Dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Kenya ay tahay dal deris la ah Soomaaliya, isla markaana ay ka mid tahay saaxibada ugu weyn ee dalalka deriska ku leedahay.
Waxaa uu soo dhoweeyay dib u bilaabashada duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi oo heshiiska maanta qeyb ka ahaa, taasoo meesha ka saareysa in diyaaradaha ka duula garoonka Muqdisho toos u tagi karaa magaalada Nairobi iyaga oo aan sii marin degmada Wajeer.
Ugu danbeyntii, labada madaxweyne ayaa ku hishiiyay in ay sii xoojiyaan islamarkaana hergaliyaan heshiiskii iskaashi ee ay labada dal kala saxiixdeen bishii July sanadkii 2015kii, ee xoogga saaray dhinacyada amniga, ganacsiga iyo maalgashiga, duulimaadka, waxbarashada, beeraha, wadaagga aqoonta iyo horumarka, horumarinta xoolaha, kalluumeysiga, dalxiiska, socdaalka, shaqaalaha iyo caafimaadka.
Madaxweynayaasha ayaa shir jaraa’id oo ay qabteen ku sheegay in wada hadalkoodu ku soo dhamaday guul iyo is afgarad